Epic "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi", ukuhlaziywa ofakelwe yalokhu kubukezwa liyakhuluma ngokuphela izikhathi Kievan Rus. Umjikelezo imisebenzi ngalokhu iqhawe bemthanda abantu isiRashiya, futhi manje ingxenye yezifundo zezikole ezincwadini. Le misebenzi temdzabu libonise ezingokoqobo emlandweni ka Rus lasendulo ', ezithakazelisayo ngakho hhayi kuphela kwezobuciko, kodwa futhi kusukela iphuzu kwezincwadi umbono.
Eyodwa yalezi zingoma edume kakhulu mayelana namaqhawe iyona amaqhawe "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi." Ukuhlaziywa kwemisebenzi kazwelonke kufanele zihlanganise kokubili ukuhlaziywa nebugagu betemibhalo, futhi umongo zomlando kwesici lelandzisako. Le nganekwane iqala incazelo uhambo ukuthi uye wathatha iqhawe dolobha Kiev. Ukuvikela ekuseni enkonzweni e Murom, wanquma ukuhambisana ukuba zesonto ezisenhloko-dolobha. incazelo yakhe ihambisana ngokugcwele ulimi Folk songs. Hercules ngokuthi ukususa, anamandla, iqhawe ekhazimulayo. Ngakusasa imigqa embalwa abazinikele izindawo lapho esebenzela khona. Abafundi kufanele ugxile incazelo ezizungeze emzini Chernigov, lapho, emazwini i umbhali akaziwa, lingamandla abamnyama.
I-Concise, kodwa ezinemininingwane izenzakalo izici kuhluke amaqhawe "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi." Ukuhlaziya iculo lasendulo kuzomele sifake analysis eningiliziwe ubunjalo, okuyokwenza abafundi ukuze uqonde kangcono kuyo umkhiqizo oyinhloko kwenzeka. Umbhali ongaziwa isebenzisa amazwi ezimibalabala, etshela ukuthi ithrekhi ngasedolobheni owodwa ingahambi ayimigundatshani ngehhashi ingahambi, ngisho izilwane nezinyoni bengahlali lapha. Lezi epithets ahlelwe ngefomu ingoma, dlulisa ngokuphelele simo esingenathemba ka ehlathini elicinene, okuyinto ushayela hero. Yini elandelayo ingenye izikhathi ezibalulekile emsebenzini: incazelo impi nge uhlamvu isitha.
Isithombe hero empini
Epic "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi", ukuhlaziywa okuyinto, kulandela amazwi Ukwakheka, kumele ihlukaniswe izingxenye eziningana lomqondo, ugxila nezigigaba bokulwa heroes. Kule migqa enikelwe ukulwa, umlobi izikhathi eziningana waphinda igama elithi "amandla" ngokusebenzisa ngezindlela ezahlukene, befuna ifomu okuningi ekhululekile ukuba adlulisele amandla wamabutho esitha, oqubuke hero. Emzamweni ukugcizelela ubuqhawe yomdlali, walandisa ngendlela iqhawe ukubhubhisa isitha, breaking, wanyathelwa amahhashi kanye ngomkhonto wakhe izizukulwane.
Ukudalulwa umlingisi ingxoxo izakhamizi
Ukuhlaziywa kwe-amaqhawe "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi" kufanele siqhubeke ukuqhuba kokuhlaziya hero lapho usakhuluma Chernigov, ngubani ngoba feat wakhe izikhali wamcela ukuba ngibe ngumbusi wabo. Kufanele kuqashelwe ezingokoqobo emlandweni zazibonakala ngoma: isihloko nababusi ngesikhathi ezibonakalayo wezempi, imisebenzi yayo zihlanganisa ukuzivikela kanye nesibopho ukuze ivikele lo muzi ekuhlaselweni isitha, kokuvinjezelwa, ukugcina amasosha empini noma inhlangano izidlamlilo kazwelonke. Ngakho-ke, leso sicelo esenziwe omunye abakhileyo iwukuqashelwa sokunconywa lakhe lempi nesithi ukuba nesibindi. Ukuhlaziywa kwe-amaqhawe "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi" kuzomele sifake ukudalulwa uhlobo hero ngokusebenzisa inkulumo yakhe, limi. Uthi i-abahumushela kulo elula, emazwini akhe ulijwayele umfundi epithets ingoma amyise umlinyana elula kusukela emzini Chernihiv. Eyesibili iphuzu elibalulekile kule scene - lokhu lobuqotho nesizotha iqhawe. Warrior izinkulumo zobuqhawe bakhe, ingozi okumlindele endleleni eya Kiev, yayinesithakazelo kuphela indlela enhlokodolobha, abese ebuza engaxoxisana ukuyichazela indlela.
Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala uhlamvu omubi
Qonda izici Russian Folk art ivumela incazelo amaqhawe "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi." Ukushintshwa kwalo kwabonisa indlela nokucabanga umphakathi zomlando wasendulo, okusemqoka kakhulu, indlela abantu langaleso sikhathi ababeyizitha izwe lazo lendabuko. Ngakho-ke, naphezu ukubukeka fabulous futhi kumnandi futhi ukuziphatha a villain kuwo, akungabazeki ukuyichaza isithombe lilonke isitha, ngawo izikhulu lasendulo Russian kanye namadoda akhe empi abanesibindi onilwelayo, kudlule nasemkhawulweni ka isimo abasha. Izakhamuzi Chernigov indaba okokuqala umfundi uthola umbono walokho kubukeka sengathi olandelayo namaqhawe ezinkulu isitha. Izimpawu nendumezulu "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi" kuzosiza abafundi baqonde izimfanelo abantu isiRashiya, umbono isitha: yena kuzwakala like inyoni futhi ngangivuka ngikhalelwa njengesilwane, uhlala e-okini, imvelo yakhe yonke ukumemeza ngokoqobo shudders, futhi isihambi uyafa.
Izici Zabantu iqhawe empini
Indawo ephakathi umsebenzi usesikhundleni yesehlakalo impi phakathi hero kanye villain. Kulokhu, abafundi kufanele sinake ukuziphatha fighters ezimbili. Umbhali ongaziwa uchaza ukuthi uyephuza yesenzo iqhawe ngubani kancane wathatha umnsalo, ngafaka umcibisholo ngaso, wathatha inhloso ngokucophelela futhi wathumela iso isitha. Ngenxa yalesi lelandzisako ethule elinganisiwe umsindo yeqhawe oludumile kakhulu "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi." namaqhawe isici wembula ngokugcwele ngokuqondile kule ngxabano. Futhi uma umlingiswa oyinhloko kugcinwa ngokuphepha, begodu ngokuzithemba khulu, ngokuqinile, ukuthi nje umphikisi wakhe, kunalokho, izenzo disingenuously, njengesilwane. Akumangazi-ke ukuthi sinikezwe imikhuba yezilwane ngokomfanekiso, yena kuzwakala like inyoni, ekhala impisi. Ukuphikisa okunjalo igxile abafundi 'isibindi futhi ngokuhaha iqhawe nomphangi.
Lesi sigameko emkhakheni
amaqhawe Landelayo isitshela indaba kanjani izihlobo villain ifuna yokumkhulula. Kwavela ukuthi Nightingale eyindodakazi wayala amadoda, zyatyam catch knight emkhakheni. Umbhali kuqhakambisa lenqwaba imibuthano isitha. Lokhu kumele kufake abafundi yokuthi abazange ngisho baye bazama ukuba asuse hero isisulu sakhe. Ngakho nendumezulu njengoba kugcizelela ukuthi ukulwa kuyize kuye, futhi uma unqobile ke akukho force isitha ngeke uthole kangcono kuye.
Ekhatsi Kiev, idolobha
Elinye iphuzu elibalulekile emsebenzini - incazelo yenhloko-dolobha, lapho iqhawe ufikile nge esabekayo yakhe, kodwa isiboshwa prostrate. Kulesi sigcawu ibonisa ezingokoqobo emlandweni we isikhathi. Umfundi uthole isithombe zokuphila ezisemadolobheni, ekamelweni phezu kwesikhulu, izindlu, egcekeni Suites, iqembu abanesibindi. Enye yezindawo eziyinhloko kule scene kuthatha Prince uVladimir Red Sun, lo hero intandokazi Folk yezinganekwane. Kuyinto esigodlweni sayo uyeza iqhawe abuye akhulume feat yakhe. Abafundi bayamangala kanyekanye kulokho okwakubizwa wathi, bese Ilya Muromets aziholele egcekeni, lapho abaphikisi bakhe uzibophile. Ukhipha umyalo wokuba yokubonisa amandla akhe, bese villain ku phambi kwesikhulu kanye retinue yakhe futhi bashaya amakhwela futhi ukumemeza njengesilwane. Khona-ke ukusikeka main ikhanda. Luhlatiyo nendumezulu "Ilya Muromets futhi Nightingale le inkunzi" nezinye imisebenzi ngalokhu umsubathi kubonisa ukuthi intandokazi uhlamvu kazwelonke ngezindlela ezahlukene ezichazwe iculo. Wabhekisela Cossack ekhazimulayo ubudala, iqhawe abanesibindi noma isakhamuzi elula. Nokho, isici esiyinhloko hero - amandla esinganqobeki nokuzimisela ukuzidela ukuvikela izwe Russian kusukela isitha ligijima umjikelezo ezinganekwaneni ngaye.
"E-Apocrypha Transerfing" - e ingokomoya esoteric kakhulu
Allen Dzheyms futhi incwadi yakhe "Ngenxa umuntu ecabanga"
Uhlu okungcono abaseshi (izincwadi kwekhulu lama-21). The best umphenyi Russian kanye angaphandle izincwadi: uhlu. Abaseshi: uhlu abalobi engcono
Yini ukupheka umama ngoMashi 8? iholide zokupheka
Isikhundla lombhali kuleli inganekwane. isikhundla lombhali kuleli inganekwane
Indlela ukususa insumpa?
Eziphilayo Zanamuhla: isithombe. ophilayo ekamelweni design isitayela yesimanje
Wazi kanjani ukuthi inombolo yakho ye-MTS nezinye izinsizakalo opharetha mobile
Yini ukupheka inkukhu webele
Ubhiya Da Hong Pao, futhi indaba edume itiye Chinese.